विकार खाने | USAHello | USAHello
तपाईं आफ्नो शरीर बारेमा नकारात्मक विचार छ किनभने तपाईं खाने समस्या हुँदा विकार खाने छन्. तपाईं गंभीर वजन परिवर्तनहरू मार्फत जाने सक्छ.
शारीरिक छवि तपाईं आफ्नो शरीर महसुस कसरी अर्थ र तपाईंले कसरी आफ्नो शरीर देखिन्छ कि लाग्छ. विकार खाने संग, तपाईं Oozank नियन्त्रण गर्न आफ्नो खाने बानी महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, तपाईं एक सानो बिट तिनीहरूले हुनुहुन्न हुँदा पनि तपाईं महसुस किनभने मोटे हो हरेक दिन खान सक्छ. जो कोहीले एक खाने विकार थियो सक्थे. तर धेरै महिला पुरुष भन्दा एक खाने विकार ग्रस्त.
त्यहाँ खाने विकार विभिन्न प्रकारका छन्. केही खाने विकार हो:
तिनीहरूले underweight हुँदा Anorexia nervosa छ, तर तपाईं अझै पनि वजन गर्न खोज्नुभएको. वजन तपाईं आफ्नो उचाइ र उमेर लागि पर्याप्त वजन छैन भन्ने हो. तपाईं anorexia nervosa छ भने:
तपाईं खाने रोक्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं धेरै अभ्यास गर्न सक्छन्.
तपाईं बाथरूम धेरै जाने सम्म तपाईं चिकित्सा लाग्न सक्छ.
तपाईं बाटो तपाईं आफ्नो शरीर मा विचार किनभने तपाईं राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ लाग्छ.
म underweight ग्रस्त हुनत वजन बढाउनका डराएका थिए.
तपाईं कहिलेकाहीं धेरै खाना खान र जस्तै तपाईं के खान नियन्त्रण गर्न सक्दैन महसुस हुँदा Bulimia nervosa छ. तपाईं खाना धेरै खाने पछि, तपाईंले खाना उन्मुक्ति छ महसुस. तपाईं bulimia nervosa छ भने:
तपाईं आफ्नो शरीर आकार र वजन कति लाग्छ.
तपाईं खाना धेरै खाने जब तपाईं पटक र त्यसपछि वजन धेरै गुमाउन प्रयास.
तपाईं खाना धेरै खाने गरेपछि उल्टी आफैलाई बनाउन सक्छ.
तपाईं पनि धेरै खाना खाने पछि खेती गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं खाना धेरै खाने पछि एक लामो समय को लागि खाने रोक्न सक्नुहुन्छ.
Binge खाने गर्दा खाना धेरै सामना र तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ जस्तो महसुस. प्रत्येक हप्ताको लागि कम्तिमा दुई पटक खाना धेरै खाने6महिना. सामान्यतया तपाईं दुःखी र लज्जित र खाने पछि दोषी महसुस.
तपाईंले यी खाने विकार को एक हुन सक्छ किन धेरै कारण छन्. कारण छन्:
तपाईं घरमा र आफ्नो परिवार संग समस्या.
कतिपयले धेरै मोटे हो वा राम्रो खोज्दैन भनेर बताउँछ.
वजन अन्य मानिसहरूलाई दबाबको महसुस. उदाहरणका लागि, तपाईं मोडेल वा नृत्य भने, यो तपाईं वजन गर्न आवश्यक छ कि मान्छे बताउँछ.
तपाईं कम आत्म-सम्मान छ. कम आत्म-सम्मान के तपाईं एक राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ वा तपाईं लाग्छ जब तपाईं केहि गर्न सक्छन् लाग्छ जब छैन.
तपाईं एउटा चिन्ता छ. परेशान गर्न कुनै कारण त्यहाँ हुँदा पनि फिक्री तिनीहरूले धेरै परेशान जब छ.
आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई एक खाने विकार वा मानसिक स्वास्थ्य को लागि अर्को चुनौती छ.
गम्भीर खाने विकार. तपाईं मदत पाउन भने, तपाईं आफ्नो शरीर कडा बिगार्न सक्छ. अधिकांश मानिसहरू लागूपदार्थ आवश्यक छैन, तर केही मानिसहरू धेरै वर्ष को लागि मेरो चिकित्सक वा आफैलाई संग कुरा गर्न आवश्यक.